ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခြေလှမ်း တစ်ရပ် ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rivian ! – MyMedia Myanmar
ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခြေလှမ်း တစ်ရပ် ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rivian !
Amazon ကုမ္ပဏီ နဲ့ Ford ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ ကားကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rivian ဟာ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာ ကောင်းမွန်နေမှုကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ပြီးတိုးတက်အောင် ကြံရွယ်နေပါပြီ။ အခုဆိုရင် လည်း နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တရားဝင်ချပြလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါမှာတော့ T.Rowe Price ဆိုသူက ဦးဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု စီမံကိန်းရဲ့ အခြားသော ပါဝင် သူတွေနေရာမှာတော့ Amazon ရဲ့ Climate Pledge Fund အဖွဲ့ ၊ Fidelity Management နဲ့ Research Company တို့က နေပြီးတော့ ပါဝင်လာဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Investment Firms Coatue နဲ့ D 1 Capital Partners တို့ တွေဟာလည်းဝင်ရောက်လာဦးမှာ ဖြစ်ကာ အခြားသော စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတွေ သူတွေလည်း ဆက်တိုက် ပါဝင်လာ ဖို့ ရှိနေပါသေးတယ်။ Rivian အနေနဲ့ အခြား သော ၂.၆၅ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ ကို ထပ်မံ ရင်းနှီးဖို့ ပြင်ဆင် နေတာ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ်မှာရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု အမြင့်ဆုံး EV Startups တွေထဲကတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ဒါ့အပြင် အခု နောက်ဆုံး ၂.၅ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာဟာ ၆ လ လောက်သာ ကြာမြင့်သေးတာ ဖြစ်ပြီး ၁.၃ ဘီလီယံ ‌ရင်းနှီးထားမှုရဲ့ တစ်နှစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်သေးတာ ဖြစ်ပါ‌တယ်။
Rivian အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းလောက်ကတင်ပဲ $ 8 Billion လောက် အထိကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု နှစ် ဟာ ကုမ္ပဏီ အတွက် အရေးပါဆုံး သော နှစ် တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကား အသစ် တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ R 1 T နဲ့ R 1 S တို့ အပြင် Amazon Commercial ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ် တွေ ကိုပါ ထုတ်လုပ် ဖန်တီးလာနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ Rivian Founder နဲ့ CEO ဖြစ်သူ RJ Scaringe က ဆိုထားခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခု လိုမျိုး ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု တွေ ကြောင့်ပဲ အခုလိုမျိုး စီမံကိန်း တွေ ဆက်လက်ချဲ့ထွင်လာနိုင်ဖို့အတွက် တွန်းအားပေး လာနိုင်ခဲ့ကာ နောက် တစ်ဆင့်ကို ဆက်လက် တိုးတက်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း အ ကောင်းဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ တယ်လို့ Scaringe က ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် လာမယ့် ဇွန်လကစလို့ Rivian ရဲ့ R1T နဲ့ R1S တို့ကို စတင် ဖြန့်ချီနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါယာဉ် နှစ်စီးလုံး ရဲ့ Launch Editions တွေက တော့ ဈေးနှုန်း တွေ အနေနဲ့ $ 75,000 နဲ့ $ 77,500 လောက် ကျသင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ် အတွင်းမှာပဲ ရောင်းကုန် ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ Amazon ပူးပေါင်းကာ လျှပ် စစ်စွမ်းအင် သီးသန့် သုံး Delivery Van ကိုလည်း ဆက်လက် ထုတ်လုပ်ဖို့ရှိပြီး မကြာသေးမီကပဲ စမ်းသပ် နေတာကိုပါ တွေ့ ခဲ့ရပါသေး တယ်။ ဒါ့အပြင် Amazon ဘက်ကလည်း သူတို့ရဲ့ Van ကားအစီးရေ ၁၀၀,၀၀၀ လောက်အထိကို အမှာစာ တွေ ရထားပြီးဖြစ်ကာ အဆိုပါ ကားတွေကိုတော့ ဒီနှစ်အတွင်း အီလီနွိုက်စက်ရုံမှာပဲ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတွေကို စတင်ပို့ဆောင်မှုကို တော့လာမယ့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် လောက်မှ စတင်မယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ အခုလို နောက်ဆုံးပေါ် အရေးကြီးတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခြေလှမ်းနဲ့ ပတ် သက်ပြီးတော့ Rivian ဘက်ကနေ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ အဖြစ် ပြောကြား ထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့် သေချာတစ်ခုကတော့ တရုတ် ဈေးကွက် လိုတန်ကြေးမြင့်တဲ့ ဈေးကွက်အပြင် ဥရောပဈေးကွက် တွေကိုလည်း ဝင်ရောက် လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုပြီးတော့ သေးငယ်တဲ့ Model တွေ ကလည်း ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အရသာ အကြိုက်ကို လည်း တွေ့နိုင်ပြီးတော့ လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ တစ်ပါတည်း ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး တစ်ချက်ကတော့ Rivian Adventure Network ဆိုတဲ့ စီမံကိန်း တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ကာ အထူးသ ဖြင့် အမေရိကတစ်လွှား အဓိကနေရာ တစ်ချို့မှာ အားသွင်း ကွန်ရက် တွေကို ဖြန့်ကျက်နေတဲ့ အခြေအနေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တောင်တက် စက်ဘီးစီး‌တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေအပြင် သာမန် တောင်တက် လမ်းကြောင်း တွေ အထိကိုပါ ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပြီး Kayaking Spots တွေနဲ့ Rock Climbing Crags တွေ အထိပါ ဖြန့်ကျက်လာနိုင်ပါ သေးတယ်။ အားသွင်းမယ့် Unit တစ်ခုချင်း စီမှာ ဆိုရင် မိနစ် ၂၀ လောက် အားသွင်းလိုက်ရုံနဲ့တင် မိုင်ပေါင်း ၁၄၀ လောက်အထိ ကောင်းကောင်းသွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း အဆိုပါ ကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်စပ်လို့ အခြားသော Rivian အသုံးပြုသူတွေ မဟုတ်တဲ့ဆီကို ဘယ်တော့ လောက် စတင်ဖြန့်ကျက် ကာ အသုံးပြုခွင့် ပေးမလဲ ဆိုတာကိုတော့ မသိရှိသေးပါဘူး။
The post ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခြေလှမ်း တစ်ရပ် ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rivian ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-22T16:00:44+06:30January 22nd, 2021|MYCARS MYANMAR|